Iwo manomwe chaiwo madhishi eMexico aunofanira kuyedza | Kufamba Nhau
7 chaiwo madhishi eMexico aunofanira kuedza
Luis Martinez | | Gastronomy, Mekisiko
Kutaura nezve chikafu cheMexico, kutanga kwezvose, kutaura nezve gastronomy inorondedzerwa se Isingaonekwe Tsika Nhoroondo yeVanhu neUNESCO. Aya mamiriro anokupa iwe pfungwa yekukosha uye hupfumi hweMexico maererano nemidziyo yayo uye nei tichiunzira iwe iyi sarudzo yeanomwe madhizaini eMexico ausingakwanise kupotsa.
Muchokwadi, isu tiri kutarisana neimwe yemakosi akasiyana munyika, zvese maererano nemidziyo yayo uye maererano nemisiyano yemadhishi ayo. Tinogona kutaura kuti nyika yega yega uye kunyangwe guta rega rega rine kicheni rayo. Nekudaro, isu tiri kuenda kuzotaura newe nezve zvakajairwa chikafu cheMexico mune yakajairwa pfungwa, ndiko kuti, yeavo nzira dzekubika dzinozivikanwa munyika yese.
1 Chaiwo chikafu cheMexico: Chidiki chenhoroondo
2 Madhishi manomwe anoita chikafu chinowanzoitika kuMexico
2.2 Burritos uye fajitas
2.3 Iyo mole, imwe yechinyakare pakati pezvakajairwa chikafu cheMexico
2.4 Nguruve diki Pibil
2.5 Escamoles nemhashu
2.7 Madhiri: chihwitsi bhinzi
Chaiwo chikafu cheMexico: Chidiki chenhoroondo
Ikozvino Mexican gastronomy ndiyo mhedzisiro yeiyo synthesis yeiyo pre-Columbian substrate uye iyo Spanish legacy. Africa, Asia, Middle East uye kunyangwe chiFrench maitiro akawedzerwa kune izvi. Kubva kune yepamberi nyika yeSpanish yatora yakawanda yezvakagadzirwa. Semuyenzaniso, chibage, chili, bhinzi, madomasi, avocado nezvinonhuwira zvakawanda zvakadai se papalo, epazote kana shizha dzvene.
Asi vese zvavo vakabatanidzwa neavo vanobva kuEurope senge gorosi, mupunga, kofi uye zvakare anonhuwirira mahebhu senge bay leaf, kumini, oregano, spearmint kana korianderi. Vakatouya neveSpanish nyama dzakadai senguruve kana huku y michero yakaita seorenji, ndimu kana bhanana.
Sezvatakakuudza, mhedzisiro yeizvi zvese chikafu chinoratidzwa ne kusiyana pakati penyika dzakasiyana dzinoumba nyika yeAztec. Hazvina kufanana kutaura nezve gastronomy yeBaja California pane kuzviita nezveChiapas pachayo. Asi zvese zvikafu zvakajairwa zveMexico zvine hwaro hwakajairika. Tinogona kutaura kuti ese akavakirwa pazvinhu senge chibage, chili uye bhinzi, pamwe nekumwe nzira dzekugadzirira mutambo iwoyo.
Madhishi manomwe anoita chikafu chinowanzoitika kuMexico
Mhando dzakasiyana-siyana dzemabikirwo anoumba chikafu cheMexico zvinoita kuti titadze kuzvipfupikisa muchinyorwa chimwe chete. Naizvozvo, isu tiri kuzotarisa pane manomwe chaiwo madhishi aunogona kuwana mune chero nzvimbo yenyika, kubva Sonora vakakwira Veracruz (tinorega iwe heino gwara kuguta rino) uye kubva Jalisco vakakwira Quintana Roo. Naizvozvo, isu tiri kuzokupa iwe yedu gastronomic chikumbiro kubva kuMexico.
Pamwe ndivo ndiro yakakurumbira yeMexico, kusvika padanho rekudarika miganhu yayo uye nhasi inogona kuwanikwa chero kupi zvako pasi. Ivo vakakosha kwazvo mune chikafu chenyika icho vanhu vayo vakagadzira seta zvirevo navo. Semuenzaniso, "kukanda taco" zvakafanana nekuenda kunodya kana "mukushaikwa kwerudo, mamwe ma tacos al pastor."
Sezvineiwo, yako yekubheka haigone kuve nyore kugadzirira. Ndezve chibage kana hupfu hwegorosi tortilla mukati mayo chinhu chinoiswa mukati. Uye chaizvo pano pane kukosha kwema tacos nekuti, zvinoenderana nezvavainazvo mukati, zvinomutsa hukuru hwakasiyana siyana hwedhishi uye vanopihwa mazita akasiyana. Asi maviri eanonyanya kufarirwa ndeaya:
Tacos dzamufundisi. Isu tatova tataura nezvazvo, asi ikozvino isu tichakuudza izvo zvinosanganisa. Kazhinji, kuzadzwa kwayo kunocherwa nyama yenguruve, kunyangwe ichigona zvakare kuve veal. Iyi marinade yakagadzirirwa nezvinonhuwira, achiote uye pasi tsvuku chili. Hanyanisi, chinanazi uye coriander zvinowedzerwawo, pamwe nemhando dzakasiyana-siyana dzesoso.
Tacos dzegoridhe. Muchiitiko chavo, iko kuzadzwa kunoitwa neyakagurwa nyama yehuku, bhinzi uye mbatatisi. Izvo zvakakangwa nenzira iyi uye ipapo grated chizi, lettuce uye muto zvinowedzerwa. Mune dzimwe nzvimbo, dzinodyiwa dzichiperekedzwa neimwe muto wakasvibira kana muto wehuku wavakanyorovesa.
Burritos uye fajitas
Burritos, zvekare pakati pezvakajairwa chikafu cheMexico
Kunyangwe mamwe mabikirwo anogona kutariswa, iwo achiripo chakazara matako zvigadzirwa zvakasiyana. Kazhinji zvinogadzirwa nemhando dzakasiyana dzenyama, mhiripiri, hanyanisi uye chili. Uye zvakare, ivo vanowanzo kuperekedzwa ne bhinzi yakabikwa uye mamwe magarnish.
Tinogona kukuudza zvakafanana nezve iyo quesadillas. Izvowo zvingwa zvechibage, kunyange zvavo peculiarity ndeyekuti cheese chikamu chekuzadza kwavo. Nekudaro, kana iwe ukashinga kuyedza chimwe chinhu chepakutanga, bvunza icho icho, mukuwedzera kune echinyakare zvigadzirwa, zvinotakura manhanga ruva.
Iyo mole, imwe yechinyakare pakati pezvakajairwa chikafu cheMexico
Ndiro yem mole
Munyika yeAztec, chero mhando sosi inogadzirwa ne chili, mhiripiri nezvimwe zvinonhuwira inogamuchira zita rekuti at the mole. Kubva pane izvi zvinowana izvo zvinogadzirwa neavocado uye iyo miriwo. Sezvaungave wafungidzira, isu takataura nezve iyo guacamole, pamwe muto unozivikanwa kwazvo muMexico kunze kwemiganhu yayo. Sechido chekuziva, isu tinokuudza kuti yakadzokera kunguva dzepamberi peColumbian uye kuti, kumaMayan, yaive nechiratidzo chekukwezva.
Nekudaro, mazuva ano, imwe yakasarudzika mhando sosi inonzi mole iyo ndeye kurudyi kune chaiwo chikafu cheMexico. Ndiyo iyo inogadzirwa zvakare nechili mhiripiri nezvimwe zvinonhuwira, asi iine chocolatey tarisa. Nekuwedzera, inonziwo nyama kana miriwo yakabikwa nemuto uyu.
Kunyangwe nyika yega yega iine yayo yekubheka, inonyanya kukosheswa mukati meMexico ndiyo mole poblano. Yakakurumbira zvekuti, gore rega rega, inopembererwa mukati Puebla un mutambo yakatsaurirwa kune uyu muto. Yakagadzirwa nemhando dzakasiyana dzechili mhiripiri, tomato, hanyanisi, gariki, chokoreti nerima nezvinonhuwira. Ukazviedza, haunganyadziswe.
Nguruve diki Pibil
Pibil izwi reMayan raishandiswa kureva chero chikafu chakagadzirwa mu hovhoni yepasi. Izvi zvaizivikanwa se pib uye ndipo panobva zita redhishi iri. Pakutanga, yaive inozivikanwa mu Yucatan peninsula, nyika inokosha uko unogona kushanyira zvatinokurudzira mune ino chinyorwa. Asi yakapararira kuMexico yese uye kunyangwe pasirese.
Zvinosanganisira nguruve marinated mu achiote, zvinonhuwira izvo zvaishandiswa zvekare munguva dze pre-Columbian. Ipapo inoiswa muhovhoni yepanyika kana yakafanana inoperekedzwa nehanyanisi tsvuku, habanero mhiripiri uye orenji yakasviba. Zvese izvi zvakaputirwa nemashizha ebhanana kuti zvisaome uye zvinosiiwa kuti zvibike husiku hwese.
Zvine musoro, dhishi iri harichagadzirwa nenzira yechinyakare, asi richiri kungonaka. Kune iwo muto, kwete chete achiote anopindira, oregano, kumini, mafuta omuorivhi, vhiniga uye wakasviba orenji muto pachawo anowedzerwa.
Isu tinosanganisa chikafu ichi pakati pechikafu chaicho cheMexico nekuti chiri chikamu chayo, asi tinokuyambira kuti, pamwe, haudi kuzviedza. Icho chikonzero chiri nyore kwazvo. The escamoles are hurungudo huturu izvo zvinodyiwa munyika yeAztec kubvira pre-Columbian nguva. Kana tikakuudza kuti vanodanwawo "Iyo caviar yeMexico", iwe unogona kuwana zano rekuti vanokosheswa sei ivo. Kazhinji dzinodyiwa dzakakangwa uye dzichiperekedzwa nemazai nezvinonhuwira zvakaita seepazote.
Kune iro chikamu, isu tinogona kukuudza zvakafanana nezve hwiza. Ndezve mhashu diki Izvo zvakare zvinodyiwa zvakabikwa, kunyangwe seanapirita kana mutacos uye quesadillas Chero zvazvingaitika, ese ari maviri anokurudzirwa kune anotyisa marate.
Izvi zvine simba chiremwaremwa Inosanganisira, kuwedzera kune muto, tsanga dzechibage dzemakoka akasiyana-siyana, huku kana nyama yenguruve uye zvimwe zvakawanda zvinogadzirwa. Pakati peizvi, semuenzaniso, hanyanisi, lettuce, kabichi, radish, avocado, chizi kana nyama yenguruve.
Uye ndezvekuti iwe unogona kuzviwana iwe pachako mhando zhinji dze pozole. Nekudaro, ivo vese vanowira mumapoka maviri: iyo chena, yakapusa nekuti inongova nezviyo nenyama uye iyo zvinonhuwira, yakawedzera kujekesa uye izvo zvinogona kuve nezvinonaka kwazvo.
Isu tinofanirwa zvakare kutarisa kwayakatangira munguva dzisati-dzeSpanish. Muchokwadi, zita rayo rinobva kuNahuatl tlapozonalli, zvinoreva kuti "yakabikwa" kana "kupenya", kunyange hazvo dzimwe dzidziso dzichiratidza kuti rine zita kwaro posoli, izwi rinobva mumutauro weCahita iro rinogona kushandurwa se "kubika chibage."
Madhiri: chihwitsi bhinzi
Hatigone kupedzisa rwendo rwedu rwechikafu cheMexico tisingataure nezvemadhiri. Zvimwe zvinowirirana neavo vatinoziva munyika medu. Kwete pasina, takatotaura kuti chikafu cheMexico chine chakasimba chikamu cheSpanish. Ndiyo nyaya ye Churros, the mupunga pudding, the fritters kana the jericallas, yakafanana neyedu custard.
Nekudaro, mamwe madhiri ari echokwadi echizvarwa. Imwe yacho ndeye bhinzi chihwitsi, chigadzirwa chiripo mune gastronomy yenyika yeAztec. Inogadzirwa nemukaka, mazai emazai, sinamoni, shuga, maamondi akapwanyika, walnuts uye chibage chegorosi, nekuwedzera, zvine musoro kubva kune bhinzi yakabikwa isina munyu.
Asi ivo zvakare vanozivikanwa kwazvo levers, mhando yekeke rakagadzirwa nemvura, huchi, nzungu dzisina kukangwa uye ruomba. Tinogona kukuudza zvakafanana nezve nhema sapote. Kunaka kwaro kunoda kuziva, zvinoshamisa kuti zvakafanana neicho chokoreti. Pakupedzisira, tinokurudzira iyo chibage kana chibage chitsva pamhondi. Kuti uitapise, ine mukaka wakanyunguduka nesinamoni pamwe nezvimwe zvinoshandiswa semazai, bota neupfu. Simply zvinonaka.
Mukupedzisa, isu takakuudza pamusoro pezvinomwe ndiro dzinoumba chinongedzo cheiyo chikafu chinowanzoitika kuMexico. Zvisinei, taigona kunge takabatanidza vamwe vakaita se lime muto, vanhu vazhinji Tamales, the tortilla machipisi kana the marquesitas. Enda mberi uye edza navo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » 7 chaiwo madhishi eMexico aunofanira kuedza
9 mafirimu ekuona usati waenda kuRoma